I-Teepee yaseklasikhi - Moi Mili
Ingobozi yakho ayinanto
Yongeza inqaku kumthengisi ...
Ixabiso elipheleleyo leenqwelomoya
Teepee kunye nebala
Teepee isethwe kunye nemat
Umjikelo wepatchwork ojikelezileyo
Ukuzaliswa kwendalo kwemicamelo
zeenkomo nezidanga zeentyantyambo
Iibhobho kunye neebhloko zentloko
Iintente ezintle zabantwana.
Iintente ze-Moi Mili ngumbono omuhle wokuhlelela ikona yokudlala yabantwana bethu okanye isipho sexesha elithile losapho. I teepees zethu zakudala zenziwe ngendwangu yomqhaphu. Yonke into yenziwe ngombala wokucoca ikotoni.
Teepee ineefestile ngasekhohlo. Iinkuni zethu zepine zithambile kwaye zigudile, sonke isakhiwo sibambelele ngentambo. Iintente ezintle zineendonga ezi-5 kunye nesiseko sepentagonal, ke zizinzile kwaye zikhulu kuneentente ezinesiseko sesikwere. Sivelisa ePoland, ikakhulu kwiimveliso ezivela kwimvelaphi yasePoland. Siyakumema ukuba uzonwabise kwihlabathi lethu kwaye siyakukhuthaza ukuba wenze iiseti zaseNdiya.
I-Teepee intente "Amandla eentyatyambo" abantwana
Intente ye Teepee "yendalo"
Intente yeTepeepee yabantwana "Iintyatyambo zasendle"
I-Teepee intente "Amachaphaza eGolide"
Intente ye Teepee "Beż" yabantwana
I-Teepee tent "Akcent" yabantwana
Intente yeTipi "Mint kunye nesanti"
Intente yeTepeepee "Majorca emvuleni"
Intente yeTepeepee "uLwandle kunye neLanga"
Intente ye Teepee "Vintage rose"
I-teepee yeklasi yokuqala
© 2020 Mili Mili | Ixhaswe yi-Shopify
American Express Apple Pay Mastercard ivisa
Sebenzisa le popup ukumisa ifomu lokubhalisa lokuposa. Nika inkuthazo kubathengi ukuba bajoyine kwaye bakhe uluhlu lwakho lokuposa.